ပါဝါ(၃ဝဝ)မကျြမှနျထူကွီးတှေ လှငျ့ပဈရတယျဆိုပွီး သကျသသောဓကတှနေဲ့ နာမညျကွီး “ ဆေးငရုပျ ” – Shangyimm
ပါဝါ(၃ဝဝ)မကျြမှနျထူကွီးတှေ လှငျ့ပဈရတယျဆိုပွီး သကျသသောဓကတှနေဲ့ နာမညျကွီး “ ဆေးငရုပျ ”
Posted on October 16, 2020 October 16, 2020 by Shangyi
ပါဝါ(၃ဝဝ)မျက်မှန်ထူကြီးတွေ လွင့်ပစ်ရတယ်ဆိုပြီး သက်သေသာဓကတွေနဲ့ နာမည်ကြီး “ ဆေးငရုပ် ”
ဆေးငရုပ်ကိုသိတဲ့သူ အားလုံးနီးပါး “ မျက်စိအားတိုးဆေး ” လို့ဘဲ သိထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နဲနဲလေး ထပ်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုစေတဲ့ အခြားဓါတ်ပစ္စည်းတွေ အများကြီး ပါဝင်နေသေးဒါကိုလည်း လေ့လာလို့ ရပါမယ်။
တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးမှာ သုံးလာခဲ့ဒါတော့ နှစ်ပေါင်း (၂ဝဝဝ) ကျော်ပြီလို့သိရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးလာကြပြီး ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဥရောပဈေးကွက်ထဲ ထိုးဖောက်နေဒါကိုလည်း လက်ရှိတွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ်။
သူ့အရသာဟာ ချိုပြီး အစိမ်းဝါးစားလို့ရတယ် ၊ ဒါမှမဟုတ် ဖျော်ရည်လိုဖြစ်စေ လက်ဘက်ရည်ပုံစံဖြစ်စေ စိမ်သောက်လို့ရပါတယ်။
သူ့မှာပါဝင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးပြုသော ဓါတ်ပစ္စည်းတွေကတော့ –
1. Very Nutritious – အာဟာရဓါတ်တွေ အများကြီးပါဝင်တယ်။
2. Excellent Source of Antioxidants – အပြင်စကားနဲ့ပြောရရင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ဆဲလ်တွေ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အသားအရည် လှပစေတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဆေးအခေါ်နဲ့ ပိုပြီးတိကျအောင် ပြောရရင် oxygen radical absorbance capacity (ORAC) ဟာ ငှက်ပျောသီး၊ ပန်းသီးတွေထက်တောင် ပိုများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
3. May help Prevent Cancer Growth – ကင်ဆာဆဲလ်ကြီးထွားနှုန်းကို လျော့ကျစေတယ်။
4. May improve Blood Sugar control – ဆီးချိုသွေးချိုကို ထိန်းညှိပေးနိုင်စေတယ်။
5. May boost Energy levels – အားအင်တွေဖြစ်ထွန်းစေတယ်။
6. May help you lose Weight – ဝိတ်လျော့တဲ့နေရာမှာ ကူညီပေးနိုင်တယ်။
7. May improve Cholesterol levels – သွေးတွင်းမှာရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့ cholesterol တွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်တယ်။
9. May help boost the Immune System – ခုခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်စေနိုင်တယ်။
EcoWatch အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ ကိုးကားထားပါသည်။
ဆေးငရုပျကိုသိတဲ့သူ အားလုံးနီးပါး “ မကျြစိအားတိုးဆေး ” လို့ဘဲ သိထားကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နဲနဲလေး ထပျလလေ့ာကွညျ့မယျဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အကြိုးပွုစတေဲ့ အခွားဓါတျပစ်စညျးတှေ အမြားကွီး ပါဝငျနသေေးဒါကိုလညျး လလေ့ာလို့ ရပါမယျ။
တရုတျတိုငျးရငျးဆေးမှာ သုံးလာခဲ့ဒါတော့ နှဈပေါငျး (၂ဝဝဝ) ကြျောပွီလို့သိရပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ စီးပှားဖွဈ စိုကျပြိုးလာကွပွီး ထုတျကုနျပစ်စညျး ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ ဥရောပဈေးကှကျထဲ ထိုးဖောကျနဒေါကိုလညျး လကျရှိတှရေ့မှာ ဖွဈတယျ။
သူ့အရသာဟာ ခြိုပွီး အစိမျးဝါးစားလို့ရတယျ ၊ ဒါမှမဟုတျ ဖြျောရညျလိုဖွဈစေ လကျဘကျရညျပုံစံဖွဈစေ စိမျသောကျလို့ရပါတယျ။
သူ့မှာပါဝငျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျအကြိုးပွုသော ဓါတျပစ်စညျးတှကေတော့ –
1. Very Nutritious – အာဟာရဓါတျတှေ အမြားကွီးပါဝငျတယျ။
2. Excellent Source of Antioxidants – အပွငျစကားနဲ့ပွောရရငျ ခန်ဓာကိုယျတှငျးရှိ ဆဲလျတှေ ပကျြစီးခွငျးမှ ကာကှယျပေးပါတယျ။ အသားအရညျ လှပစတေယျပေါ့ဗြာ။ ဆေးအချေါနဲ့ ပိုပွီးတိကအြောငျ ပွောရရငျ oxygen radical absorbance capacity (ORAC) ဟာ ငှကျပြောသီး၊ ပနျးသီးတှထေကျတောငျ ပိုမြားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
3. May help Prevent Cancer Growth – ကငျဆာဆဲလျကွီးထှားနှုနျးကို လြော့ကစြတေယျ။
4. May improve Blood Sugar control – ဆီးခြိုသှေးခြိုကို ထိနျးညှိပေးနိုငျစတေယျ။
5. May boost Energy levels – အားအငျတှဖွေဈထှနျးစတေယျ။
6. May help you lose Weight – ဝိတျလြော့တဲ့နရောမှာ ကူညီပေးနိုငျတယျ။
7. May improve Cholesterol levels – သှေးတှငျးမှာရှိတဲ့ မကောငျးတဲ့ cholesterol တှကေို လောငျကြှမျးစနေိုငျတယျ။
9. May help boost the Immune System – ခုခံအားစနဈကို မွှငျ့တငျစနေိုငျတယျ။
EcoWatch အငျတာနကျစာမကျြနှာမှ ကိုးကားထားပါသညျ။
#Myitkyina #Putao #ဆေးငရုပျ